Luke Shaw Oo Tababar Gaar Ah Ku Qaadanaya Carrington Xilli Ciyaartoyda Kale Ee Man United Fasax La Siiyay - Wargane News
Home Sports Luke Shaw Oo Tababar Gaar Ah Ku Qaadanaya Carrington Xilli Ciyaartoyda Kale...
Daafaca bidix ee Manchester United Luke Shaw ayaa lagu soo rogay nidaamka ah inuu si shaqsi ah tababar ugu sameeyo xerada tababarka kooxda Carrighton xilli badi ciyaartoyda United ay maqan yahiin.
In badan oo ka mid ah ciyaartoyda Red Devils ayaa gudanaya waajibaadkodoa qaran, halka qaarkoodna la siiyay maalmo fasax ah madama ay daal fara badan qabaan, balse Luke Shaw iyo Cris Smalling wey ka duwan yahiin ciyaartoyda kale.
Daafaca reer England ayaa shaqo adag qaban doona isagoo ku shaqeyn doona qolka jirdhiska kooxda, barkadda lagu dabaasho iyo barnaamijka orodka todoabaadka, halka Cris Smalling uu isaga ka shaqeynayo sidii uu uga soo kabsan lahaa dhaawac cagta kasoo gaaray.
Labadaan ciyaartoy ayaa dhaleeceyn kala kulmay tababare Jose Mourinho todobaadkaan iyadoo macalinka reer Portugal uu qiray in Shaw uu isaga cadeeyay inuusan taam u aheyn Swansea City subaxnimadii Axadda.
“Waxaa u dhaxeeya farqi geesiga doonaya inuu ku ciyaaro xaalad walba iyo kan ay xanuun yar kala duwanaasho u abuureyso” Ayuu yiri Jose Mourinho oo labadaas ciyaartoy ku eedeeyay go’aamada nafsaaniga ah oo ay qaateen.
10-kii weeraryahan ee abid ugu wacnaa Premier League-ga…..Sida ay u kala horreeyaan iyo xogohooda